» नेपाल आईडलमा कसको जोडी हिट ? भाग २
नेपाल आईडलमा कसको जोडी हिट ? भाग २
२३ माघ २०७६, बिहीबार १७:२०
मकवानपुर, २३ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ मा उत्कृष्ट ११ प्रतियोगीहरु छानिएका छन् । उत्कृष्ट ११ छानिनुअघि गाला राउण्डको दोस्रो हप्ताको पहिलो प्रस्तुतिमा १२ प्रतियोगीहरुलई जोडी बनाएर प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । युगल प्रस्तुतिमा जोडी बनेका प्रतियोगीहरुलाई दर्शकहरुले पनि निकै रुचाएर कमेन्ट गरेका थिए । यस भिडियो सामग्रीको दोस्रो भागमा बाँकी रहेका ३ जोडीहरुमा कसको जोडी कस्तो रह्यो अनि को कति हिट भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । तपाईलाई पनि कुनै जोडी राम्रो लागेको भए भिडियोमा कमेन्ट गर्नसक्नुहुन्छ ।
बिहिबारको चौथो जोडीका रुपमा मोरङकी सज्जा चौलागाई र बर्दियाका प्रविण बेड्वालले प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुले निश्चल बस्नेत र मीना निरौलाको आवाजमा रहेको ‘काले दाई’ बोलको गीत गाएर स्टेजमा तहल्का मच्चाएका थिए । उनीहरुको दमदार प्रस्तुतिमा तिनै जना निर्णायक, विशेष अतिथि र दर्शकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । निर्णायकहरु नै स्टेजमा उक्लेर नाचेपछि नेपाल आईडलको सेटमा तहल्का मच्चिएको थियो । उनीहरु दुबै यस राउण्डका रेस्पेक्टफुल पर्फोमर तथा रकिङ सिंगरका रुपमा गनिए । उनीहरु दुबै जना उत्कृष्ट ११ मा समेत प्रवेश गरिसकेका छन् । बिहिबार र शुक्रबार रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स दिएकी सज्जाले शुक्रबारको प्रस्तुतिका आधारमा ‘रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक’ को अवार्ड समेत जितिसकेकी छिन् । यस अघि नै उनले गाला राउण्डको पहिलो हप्तामा ‘रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक’ को अवार्ड जितिसकेकी छिन् । उनले काठमाडौँ अडिसन र थिएटर राउण्डको बेस क्याम्पबाट ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे’ को अवार्ड पनि जित्न सफल भएकी थिईन् । यसर्थ उनले नेपाल आईडलमा ४ वटा अवार्डहरु जितिसकेकी छिन् । अहिलेसम्म सिजन ३ मा ४ पटक अवार्ड जित्ने उनी एकमात्र प्रतियोगी हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
नेपाल आईडलमा रक स्टारको छवि बनाएकी सज्जा मोरङ निवासी हुन् । उनी २२ वर्षकी छिन् । अहिले काठमाठौँ नारायणटारमा बसोबास गर्दै आएकी सज्जाले साँगितिक दुनियाँमा ६ वर्षदेखि लागिपरिहेकी छिन् । सानैदेखि गीत गुनगुनाउने सज्जाले विद्यालयमा विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिँदै गायन कला तिखारेकी हुन् । संगीतमा कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएकी सज्जाले प्लस टु अध्ययनका क्रममा विभिन्न स्थानमा स्टेज सिंगरको रुपमा पनि काम गरेकी थिईन् । आमा वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा साईप्रास गएपछि सज्जाले भाईको जिम्मेवारी समेत बहन गर्दै आएकी छिन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन समेत दिएर बसेकी सज्जा एसएलसी पश्चात नै ब्याण्डमा जोडिएकी थिईन् । ‘द लोडिङ ब्याण्ड’ मा आवद्ध उनलाई ब्याण्ड मेम्बरहरुले साँगितिक करियर निर्माणकालागि निकै सहयोग गरेका छन् । स्कुल, कलेज र स्टेज सिंगर हुँदै नेपाल आईडलको मञ्चमा पुगेकी सज्जाले निरन्तर संगीत क्षेत्रमा लाग्ने सोच बनाएकी छिन् । सज्जाको भोटिङ कोड एनआई ११ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७११ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्ुनहुन्छ ।
बर्दिया निवासी प्रविण बेड्वाल नेपाल आईडल सिजन ३ मा ऐतिहासिक प्रस्तुति दिने प्रतियोगीहरुमध्येका एक हुन् । उनले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता नरेन्द्र प्यासीको आवाजमा रहेको ‘के भुल भयो प्रिया’ बोलको गीत गाएर ‘कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ को अवार्ड समेत जितेका थिए । निर्णायक कालिप्रसाद बासकोटाले उनलाई उस्तादको संज्ञा समेत दिएका थिए । उनको प्रस्तुति नै सिजन ३ को गाला राउण्डमा पहिलो रेष्पेक्ट पर्फोमेन्स बन्न सफल भएको थियो । नेपाल आईडल सिजन ३ मा सुमधुर आवाजका कारण चिनिएका प्रविण २३ वर्षका छन् । बुटवल अडिसनबाट छनौट हुँदै उत्कृष्ट ११ को यात्रा तय गरेका प्रविणले सँगीत विषयमा नै स्नातक गरेका छन् । साँगितिक परिवारमा नहुर्के पनि उनी संगीतको क्षेत्रमा सानैदेखि सक्रिय छन् । सुरुसुरुमा आफु गायन क्षेत्रमा लाग्दा परिवारको त्यति साथ नपाएता पनि संगीतमा उनको रुचि झनझन बढ्दै गयो । अरुले त्यति साथ नदिएपनि उनलाई उनको हजुरआमाले हौसला दिएको उनी सम्झन्छन् । कक्षा १० सम्म गाउँमा नै अध्ययन गरेका प्रविणले त्यसपछि काठमाडौँको बसाई सुरु गरे । काठमाडौँ आएर त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएका प्रविण पछि संगीत विषयमा नै अध्ययन गर्नका लागि भन्दै भारतको तमिलनाडुमा पुगे । त्यहाँबाट नै उनले संगीतमा स्नातक गरेका हुन् । स्नातक पश्चात ‘जात्रा’ नामक ब्याण्डमा आवद्ध भएका उनले संगीतको शिखरमा थप प्रगति गर्न थाले । सुरुमा रिझाउन नसकिएको परिवारले पनि नेपाल आईडलमा आएपछि उनलाई साथ दिन थालेका छन् । वास्तवमा प्रविणका बुवा आर्मीमा थिए । आफ्नो छोरालाई पनि आर्मी बनाउने सपना देखेका बुवाको ईच्छाविपरित प्रविणले संगीतको बाटो समातेका थिए । बुवा भनेको नमान्दै ‘संगीत कि घर’ भन्ने अप्सनमा उनले संगीतलाई रोजेका थिए । त्यसैकारण प्रविण संगित क्षेत्रमा लागेको उनको परिवारलाई सुरुमा राम्रो लागेको थिएन । तर संगीत क्षेत्रमै लागेर प्रसिद्धि कमाएका कारण अहिले उनका बुवा पनि खुशी छन् । प्रविणले संगीत क्षेत्रमै लागिरहने अठोट गरेका छन् ।
बिहिबारको पाँचौँ जोडीका रुपमा चितवनका केविन ग्लान तामाङ र पोखराकी ममता गुरुङले रोमान्टिक प्रस्तुति दिएका थिए । यी दुईको जोडी नेपाल आईडलकै सबैभन्दा रोमान्टिक जोडीका रुपमा देखिए । उनीहरुले सुगम पोखरेल र रजिना रिमालको आवाजमा रहेको ‘कस्तो हो यो’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । रोमान्टिक प्रस्तुति दिएका यी दुबै प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट ११ मा प्रवेश गरिसकेका छन् । नेपाल आईडलमा रकिङ प्रस्तुति दिँदै चर्चामा आएका केबिन ग्लान तामाङले गाला राउण्डको पहिलो हप्ताको दोस्रो दिन ‘कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमर अफ द डे’ को अवार्ड समेत जितेका थिए । साथै उनले बिरगञ्ज अडिसनबाट बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड समेत जितेका थिए । नेपाल आईडल सिजन ३ मा दमदार प्रस्तुतिका कारण चर्चामा रहेका केविन चितवनको पर्सा निवासी हुन् । उनी २१ वर्षका छन् । सानैमा आफ्ना दाजुहरुले गीतार बजाएको देखेर केविन संगीतमा आकर्षित भएका हुन् । पढाई र सँगीतलाई सँगै अगाडि बढाएका केबिनलाई १४ वर्षको उमेरमा बुवाले उपहार दिनुभएको गीतारले थप प्रगति गर्न हौस्यायो । गायक स्वप्निल शर्मालाई आईडल मान्ने केबिन स्याडोज ब्याण्डको ठूलो फ्यान हुन् । सुरुमा गीत गाउन लजाउने केविन गितार भने निकै राम्रो बजाउने गर्थे । उनले सँगीतको यात्राकै क्रममा ‘शास्त्र’ नामक ब्याण्ड जोईन गरे । त्यस ब्याण्डमा केही वर्ष बिताएका केबिन र उनको टिमले पछि अक्टेब ब्याण्ड स्थापना गर्यो । उनी गत ५ वर्षदेखि सोही ब्याण्डमा आवद्ध छन् । विभिन्न स्थानमा गीगहरु गर्दै आएको ब्याण्डलाई उनी निकै माया गर्छन् । ब्याण्डका साथीहरुले उनको अभ्यासका लागि निकै सहयोग समेत गर्दै आएका छन् । म्युजिकलाई आफ्नो प्यासन बताउने उनी सोही प्यासनलाई करियरका रुपमा अगाडि बढाउन चाहान्छन् । एक महिना मात्र औपचारिक संगीत सिकेका केविन संगीतलाई मानिसको मनसम्म जोडिएको भावना व्यक्त गर्ने माध्यमको रुपमा परिभाषित गर्छन् । उनले सन् २०१७ तिर एउटा गीत समेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
केविनको भोटिङ कोड एनआई ०२ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०२ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सकिन्छ । नेपाल आईडल सिजन ३ को मञ्चमा सबैको मन जित्न सफल ममता गुरुङ १७ वर्षकी छिन् । रेडियो साराङकोटमा रेडियो जक्कीका रुपमा कार्यरत ममताले सानैदेखि बुवासँग संगीत सिकेकी हुन् । संगीत क्षेत्रमा नै संघर्षरत बुवाको पदचाप पछ्याउँदै अघि बढेकी ममता आफ्नो आमाबुवाको सपना पुरा गर्न चाहान्छिन् । कारणवश संगीत क्षेत्र छोड्न बाध्य भएका आफ्ना बुवाको अधुरो सपना उनी पुरा गर्न चाहान्छिन् । शास्त्रीय संगीतमा रुचि राख्ने ममताको संगीतको पहिलो गुरु नै उनको बुवा हुन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत ममता निरन्तर संगीतको शिखरतर्फ अग्रसर छिन् । ममताको भोटिङ कोड एनआई ०४ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०४ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ ।
बिहीबारको अन्तिम जोडीका रुपमा पोखराका नेशन पुन मगर र मुस्कान रानाभाटले प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुले हरकुलस बस्नेत र निकिता थापाको आवाजमा रहेको ‘उडायो हावाले’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । निकै नै रोमान्टिक प्रस्तुति दिएका यी दुबै प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट ११ मा प्रवेश गरिसकेका छन् । पोखराका नेशन पुन मगरले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका थिए । उत्कृष्ट १२ मा परेकाहरुमध्ये नेशनले सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका हुन् । ‘हाईएस्ट भोटेट कन्टेस्टेन्ट’ बनेका नेशन २० वर्षका छन् । सानोमा फुटबलमा रुचि भएता पनि उनका बुवाले उनलाई फुटबलको सट्टा गितार किनिदिए अनि दाईले गितार सिकाईदिए । त्यसपछि नै उनी संगीतको यात्रामा सरिक भएका हुन् । औपचारिक रुपमा संगित नसिकेतापनि उनले अनलाईनबाट संगीत बारे धेरै कुराहरु सिकेका छन् । विभिन्न कभर गीत समेत गाएका नेशनले अहिलेसम्म आफ्नै गीतभने सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनी पोखराको ‘एमपी’ ब्याण्डमा आवद्ध छन् । यसअघि नेपाल आईडलको दोस्रो सिजनमा समेत सहभागी भएका उनले पोखरा अडिसनबाट बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे पनि जितेका थिए । नेशनको भोटिङ कोड एनआई ०८ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०८ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ ।
पोखराकी मुस्कान रानाभाटले गाला राउण्डको दोस्रो हप्ताको प्रस्तुतिमा ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक’ अवार्ड समेत जितेकी छिन् । नेपाल आईडल सिजन ३ मा फरक प्रस्तुतिहरु दिएर चर्चामा आएकी २२ वर्षिया मुस्कानले संगीत विषयमै स्नातक अध्ययन गरिरहेकी छिन् । ९ वर्षको उमेरमा नै ‘बेबी मुस्कान’ नामक एल्बम निकालेकी मुस्कान सानै उमेरदेखि सँगीतको क्षेत्रमा लागेकी हुन् । सानोमा गाउन नजाने पनि गाउँछु भन्दै अग्रसरता देखाएको उनी सम्झन्छिन् । सानोमा साईबाबाको भजन गाउने गरेकी मुस्कानले साँगितिक परिवारमै हुर्कने मौका पाएकी थिईन् । बुवा साँगितिक बाजाहरु ब्जाउने र आमा गाउने कलामा निपुण भएका कारण मुस्कानले पनि संगीतमा रुचि राख्दै अघि बढेकी हुन् । संगीतकार बन्ने बुवा र आमाको सपनालाई अहिले मुस्कानले अघि बढाएकी छिन् । आफु सहभागी भएको कुनै पनि साँगितिक कार्यक्रममा प्रथम हुने गरेकी मुस्कानलाई उनका परिवारले पनि संगीतमै करियर बनाउन मदत गरेका छन् । मुस्कानको भोटिङ कोड एनआई ०७ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०७ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाकम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।